7 Eyona Bachelor kunye neeBachelorette Trips eziphambili eYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 7 Eyona Bachelor kunye neeBachelorette Trips eziphambili eYurophu
Ukucwangcisa ubhekiso kwi-bachelorette okanye kwi-bachelor. Yintoni enokuba yinto emnandi kunokufumana lonke iqela ukuba lihlangane ne-adventure engendawo eYurophu? Ingakumbi ngaphambi kokuba abo banethamsanqa kwiqela bahlale phantsi.
I-Yurophu indawo entle yokufumana iindawo. Sikhethwe ngesandla 7 kweyona bachelor kunye nee-bachelorette iihambo eziphambili eYurophu. Ukusuka kwiindawo zokuhamba ezihonjisiweyo ze-spa-themed to all-night-party and barping hop. ke, Uza kwenza olona hambo luhlabayo lomtshakazi kunye nomyeni.
1. UHedonistic uhlahlo-lwabiwo-mali lobuhlobo / iBachelorette eBerlin
Ngomfanekiso omkhulu webar, IBerlin yindawo entle eya kubumnandi kwaye imnandi kunye ne-bachelorette yohambo eYurophu.
IBerlin yaziwa ngamaqela ayo obuhlanya kunye ne-Oktoberfest kwaye ilungile kwi impelaveki ibalekile. Ungaqala ipati ngokufumana iipuzzle ezintle zeqela lemigulukudu kwigalari eyaziwayo yase-East Side. ke, qhubekeka kukhenketho olwenziwe ngobuqu okanye ufumane umntu kwaye yiya enqwelweni. Ngaphezu, IBerlin likhaya kwezinye iindawo ezintle, apho unokutshayela yonke imngxunya emva kobusuku bokuhlaselwa.
2. Bachelorette / Bachelor Uhambo ukuya eAmsterdam
Inodumo kwaye iyathandeka, IAmsterdam sisixeko esisono saseYurophu kunye neparadesi encinci. Ukuba ucwangcisa uhambo lwasentwasahlobo lwe-bachelorette eYurophu, emva koko iAmsterdam yeyona nto ithandekayo. Imingxunya evelayo, Amakhaya anemibala kunye neekhefi ezintle, iindlela zokuhamba ngebhayisikile, kwaye ngokuqinisekileyo umsitho weentyatyambo ngoMeyi. Yonke le mimangaliso iya kwenza umtshakazi-ukuba azive ekwindawo yesixhenxe.
kunjalo, ukuba unomdla kwimpelaveki ephucukileyo ukubhiyozela ixesha lokugqibela lenkululeko, ke iAmsterdam ifanelekile itheko lesilwanyana sasendle. Qala kwi-muse du Sexe kwisithili sezibane ezibomvu, kwaye ugqiba ngesiselo kunye ne-striptease isidlo sangokuhlwa. Ngaloo ndlela, Uhambo lwe-bachelor e-Amsterdam ngokungathandabuzekiyo luhambo olungalibalekiyo.
3. Bachelorette / Bachelor Uhambo ukuya ePrague
Ngokuqinisekileyo amanenekazi aya kuzixabisa iimbono zesixeko esihle sasePrague, bokwakha, kanye art. Ukwengeza, IPrague yaziwa ngeegadi zayo zebhiya ezingaphezulu kwe-notch kunye neearha. Oku kuthetha ukuba imivalo yePrague isezona ndawo zintle kwaye isebenzisa ezona ziselo zimnandi nezinobuchule eYurophu, umzekelo, Ibha yeHemingway cocktail. Emva kweziselo ezimbalwa ukuba ufuna ubusuku bendle ngokwenyani, intloko ukufumana iPrague yodumo lwehlabathi Indawo yobusuku. Ukunyanga loo ntsasa hangover, Jonga eyona ndawo ikhuselekileyo yekofu ePrague, Mug Cafe. elithile yabo neziselo zekofu etyebileyo ukutya okumnandi.
kunjalo, ukuba awufuni ukulahlekelwa yingqondo yakho kubusuku bokutya, emva koko yiya ngaphandle kweziko ledolophu. I-Prague likhaya kwii-thermals ezininzi kunye ne-spas apho ungazifumana khona ipamper ngokwakho emva kokutyelela i inqaba eyenzelwe oko. Ngokuqinisekileyo oku kuyakwenza ukuba umtshakazi-abe ngathi yinkosazana phakathi Intsomi. Enye into emnandi amadoda aya kuyithanda ngokupheleleyo kukuhamba emilanjeni.
4. Ukuya eBudapest
Uyilo olothusayo kwaye umlambo waseDanube uwela ngaphesheya, yenza iBudapest ibe sisiqalo esimangalisayo se-bachelorette kunye nohambo lwe-bachelor.
Iziselo kunye neqela lephenyane elihamba ezantsi emlanjeni waseDanube, ukuwela isixeko ngombono woyilo oluhle kakhulu, Ilungele ipati ye-bachelorette kunye ne-bachelor. Olunye ukhetho oluhle yimpelaveki yokuphumla kwindawo enobunewunewu kunye namantombazana. IBudapest sisixeko esikhulu sayo ukhenketho lokutya, apho ungazama iwayini yesizwe ku-Eger noSomlo kwaye ungcamle izitya zesiko lesiHungary esidlweni ukubhiyozela ubomi bokugqibela.
I-Faust Wine Cellar yenye yeefayile ezindala kakhulu eYurophu kunye nalapho unokufumana khona Zonwabele ezona wayini zintle kunye nokunambitha kokunkcenkceshela umlomo kunye nezinye iziselo.
5. Uhambo lwesidanga / iBachelorette Uhambo oluya eTirol
Olona hambo lunkqenkqeza phambili kunye nolukhuthazayo lokuya e-Europe, Umda weTirol eOstriya ngowona uphambili. Uya kuziva ngathi ubuyela kwimvelaphi. Ukuhlala ujikeleze umlilo wekampu, Ngaphandle kwekhabhathi yakho eyenziwe ngeplanga barbeque kunye neziselo. Ukuba iqela lengenela iqela I-adventure yokukhwela ilitye, ukuqabela, kunye neminye imisebenzi emininzi yangaphandle, ke Indawo47, lukhetho olukhuthazayo lwempelaveki yonke kunye neqela elimnandi.
I-Tirol ikwalungele uhambo lwe-bachelorette, ngakumbi ukuba uyachacha kwaye ufuna ukuba namava kwindalo enye iindawo ezintle eYurophu. Iimbono ezintle kunye nomoya omtsha zilungele ukudibanisa kunye nokudala amaxesha angenakulibaleka emahlathini kunye neengcango zamanzi eTirol.
IMunich kwi-Innsbruck ngoLoliwe
I-Salzburg kwi-Innsbruck ngoLoliwe
I-Oberstdorf ukuya e-Innsbruck ngoLoliwe
I-Graz ukuya e-Innsbruck ngoLoliwe
6. I Swiss Alps
Iimbono ezikhuthazayo, ezintabeni, Izihlambo, neengxangxasi kwi iiAlps zaseSwitzerland siseto esifanelekileyo sohambo olungamaphupha aphathekayo lwe-bachelorette eYurophu. Ii-Alps zaseSwitzerland zombini ziyiparadesi kunye neDisneyland yeqela eliphikisayo. Umzekelo, ukuba iqela lakho lithanda imisebenzi yangaphandle, emva koko unokuhambahamba ngeenyawo xa ubusika. okanye, kwelinye icala, ukuba yintwasahlobo okanye uhambo lwasehlotyeni, ke, ukuhamba, okanye ukubanda kwilali enomtsalane zizinto nje ezimbalwa zezinto eziza kwenziwa kule ndawo intle kangaka.
Ngelixa uhambo lwe-bachelor kunye ne-bachelorette ukuya kwii-Alps zaseSwitzerland kunokuba yinto ecocekileyo kunempelaveki eya eBerlin okanye ePrague, isenokuba kulapho wenza khona iinkumbulo ezihlala ixesha elide kwaye zixabiseke kakhulu.
Isiseko sokuThunyelwa koololiwe
IGeneva ukuya eZermatt ngoololiwe
UBern ukuya eZermatt ngoololiwe
Lucerne ukuya eZermatt ngoololiwe
7. Uhambo lwesidanga / iBachelorette Uhambo oluya Aquitaine, Fransi
Uhambo lwe-bachelorette kunye ne-bachelor lithuba elihle lokuya kwi-adventure, zama into entsha kwaye uhlukane nezinto ezixakekileyo. Kutheni ungakwenzi ngesitayela kwaye uhambe yonke indlela kwaye uchitheke ekuphambeni? Glamping luhlobo olumangalisayo lwe-bachelor-ukubetha kwengqondo kunye nohambo lwe-bachelorette. Iindawo ezisemaphandleni zaseFrance ziyamangalisa indawo yokukhempisha kwii-yurts ezinokuhonjiswa zaseMongolia kwindawo yefama yaseFransi ephefumlayo kunye nabahlobo bakho abasenyongweni.
Iphuli yangaphandle, iziqhamo, isidlo sakusasa ebhedini, umlilo wasekampini, Ukuhamba ngebhayisekile kwiintaba ezintle konke malunga nokubuyela umva kwimeko yendalo. Uhambo lwe-Bachelorette kunye ne-bachelor ngamanye amaxesha amahle kakhulu kubomi bomntu wonke. Ngaloo ndlela, Kufanele ukuba ibhiyozelwe kwezona ndawo zintle ehlabathini kwaye iYurophu ilungile ukuba iphupha okanye i-bachelorette safari.
Kulula kakhulu ukuqeqesha ukuhamba eYurophu kwaye uhambe ngayo Gcina A Isitimela ukuya nakweyiphi na indawo esixekweni 7 Iindawo ezifanelekileyo zokuhamba uhambo lwe-bachelor.
Ngaba uyafuna ukusibetisa iposti yebhlog yethu "I-7 Bachelor Best kunye Bipsorette Uhambo eYurophu" kwisiza sakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-bachelor-bachelorette-trips-europe%2F%3Flang%3Dxh ‎– (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
i-bachelor bachelorandbachelorette bachelorette BachelorettetripEurope BachelortripEurope TravelAlps UkutyaPrague indawo yokuhamba TravelTirol